भारतको धार्मिक सभा 'कोरोना केन्द्र' बन्ने खतरा
भारतको धार्मिक सभा 'कोरोना केन्द्र' बन्ने खतरा सहभागीमा धमाधम देखिँदै कोरोना, १९ नेपाली कहाँ छन्?
नेपाल लाइभ बुधबार, चैत १९, २०७६, ११:५९
एजेन्सी–भारतको नयाँदिल्लीस्थित निजमुद्दीनमा हालै मुस्लिम संथा तबलिगी जमातले गरेको धार्मिक सभा कोरोना भाइरसको ‘ईपिसेन्टर’ भन्ने सम्भावना देखिएको छ।
भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार २ हजार ५ सय जना सहभागी उक्त सभाका सहभागीमा भटाभट कोरोना पोजेटिभ देखिन थालेपछि भारतसहित छिमेकी देशहरुमासमेत त्रास सिर्जना भएको छ। उक्त सभामा विश्वका विभिन्न देशबाट १७ सय मानिस सहभागी भएको दिल्ली प्रहरीले पाएको थियो।
उक्त सभामा नेपालका १९, मलेसियाका २०, अफगानिस्तानका एक, म्यानमारका ३३, किर्गिस्तानका २८, इन्डोनेसियाका ७२, थाइल्याण्डका ७, श्रीलंकाका ३४, बंगलादेशका १९ र अन्य देशका नागरिक सहभागी भएको खुलेको छ।
उक्त सभामा सहभागीमध्ये ६ जनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ भने ९३ जनामा कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आएको छ। करिब ७०० जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। सहभागीहरु आ–आफ्ना देश फर्केपछि एसियामा कोरोना भाइरस सार्ने केन्द्रको रुपमा यो धार्मिक सभा हुने सम्भावना देखिएको छ।
मौलानाविरुद्ध दिल्ली प्रहरीद्वारा मुद्दा दायर
दिल्ली प्रहरीले निजामुद्दीन पश्चिममा भएको धार्मिक सभाको अगुवाई गर्ने मौलाना सादविरुद्ध कोरोना भाइरस फैलाउन सहयोग गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरुले भेला हुन रोक लगाउने राज्य सभाको नियम उल्लंघन गरेको, सामाजिक दुरी कायम नगरेको र संक्रमण फैलाएको आरोप प्रहरीको छ। निजामुद्दीन मरकजका मौलाना सादलाई सरकारी आदेश उल्लंघन, महामारी रोग कानुन र भारतीय दण्ड संहिताका अन्य धारा अनुसारको सजाय दिल्ली प्रहरीले माग गरेको छ। जमात मुख्यालय मरकज निजामुद्दीनले भने आफूले कुनै पनि कानुन उल्लंघन नगरेको जिकीर गरेका छन्।
भारतमा यो सभामा सहभागी भएका तमिलनाडुका ५०, अण्डमान का ९ र दिल्लीका २४ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ भने अन्य राज्यका मानिसमाथि पनि परीक्षण सुरु भएको छ। सभा १ देखि १५ मार्चसम्म चलेको थियो।
कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन भारत सरकारले सभा सम्मेलन गर्न रोक लगाएको बेला यो धार्मिक सभा भएको थियो । तर, सभा भएको स्थाननजिकै पर्ने दक्षिणी दिल्लीका केही मानिसमा आइतबार परीक्षण गर्दा पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि भारत र अन्य देशमा त्रास फैलिएको छ।
दिल्ली सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री सत्येन्द्र जैनका अनुसार उक्त धार्मिक सभामा सहभागी भएकाहरुको कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पाइएकाले ७०० लाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको र अन्यको खोजीका लागि पत्राचार भइरहेको बताएका थिए।
२४ मार्चमा प्रहरीले हजरत निजामुद्दीनलाई उक्त सभा रोक्न माग गर्दै एक नोटिस पठाएको थियो। प्रहरीलाई उक्त सभा रोकिएको र पछिल्लो दिनमा १५०० मानिस फर्किएको जवाफ दिएको थियो। तर यसपछि पनि उक्त सभामा विभिन्न राज्यका एक हजार मानिस त्यहाँ बाँकी थिए।
अहिले भारतका विभिन्न राज्यमा त्यो धार्मिक सभामा सहभागीहरुको खोजी भइरहेको छ । उनीहरुलाई परीक्षणका लागि अस्पताल पठाउने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम चलिरहेको छ ।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले गृह मन्त्रालयलाई उद्दृत गर्दै जनाएअनुसार सभामा दुई सय ८१ जना विदेशी थिए। जसमा नेपालसहित अफगानिस्तान, मलेसिया, म्यानमार, कीर्गिस्तान, थाइल्याण्ड, श्रीलंका, बंगलादेश, इंगल्याण्ड, फिजी, फ्रान्सलगायत मुलुक छन्।
यसअघि मलेसिया र दक्षिण कोरियामा पनि धार्मिक स्थलको भेलाबाटै कोरोना भाइरस मुलुकभर फैलिएको थियो ।
१९ नेपाली सम्पर्कमा छन्?
दिल्लीको धार्मिक सभामा सप्तरीसहित विभिन्न स्थानका १९ जना नेपालीसमेत सहभागि भएको चर्चाले नेपालमा पनि त्रास सुरु भएको छ। सहभागीहरु हालसम्म नेपाल फर्के÷नफर्केको विषय पुष्टि भएको छैन।
यसैबीच, सोही कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा भ्रमण गरेर फर्केका ९ जना सहभागी भित्रिएपछि सप्तरीमा भने त्रास सिर्जना भएको छ। तीन दिनअघि बेलही सीमा हुँदै ल्याईएका उनीहरुलाई हाल वोदेवरसाईन–५, जाँजर स्थित क्वारेन्टाईनमा राखिएको छ । ९ मध्ये सुनसरीको भोक्राहाका १, सिरहाको रमौलाका १ र अन्य सप्तरीका छन् । एक जना राजविराज र अन्य वोदेवरसाईनकै स्थायी वासिन्दा रहेको वोदेवरसाईन नगरपालिका ५ का वडाध्यक्ष मो. मजिवुर रहमानले वताए ।
उनीहरुको प्राथमिक स्वास्थ्य जाँचका क्रममा कुनै समस्या नदेखिएको र तापक्रमसमेत सामान्य रहेको उनको भनाइ छ। उनीहरु दिल्लीको कार्यक्रममा नभई नेपाल तथा भारतको सीमा आसपासका क्षेत्रको भ्रमण गरेर फर्केको मजिवुरले जानकारी दिए ।
‘चार महिनाअघि गएकाहरु दिल्लीको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए’, उनले भने, ‘क्वारेन्टाईनमा राखिएकाहरु ४० दिने कार्यक्रम (जमात) मा सहभागी भएका हुन्, उनीहरु दिल्ली गएनन् ।’
के भन्छ तबलिगी जमात ?
आफ्नो धार्मिक सभावाट कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको खवर आएपछि सोमबार तबलीगी जमातले वक्तव्य जारी त्यसको बचाउ गरेको छ।
‘यो कार्यक्रम एक वर्ष पहिल्यै तय भएको थियो । जब भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनता कफ्र्यू घोषणा गरेपछि कार्यक्रम तत्काल बन्द गरिएको थियो,’ उसले दावी गरेको छ, ‘तर, पूर्ण लकडाउन घोषणा हुनुभन्दा पहिले नै केही राज्यले ट्रेन र बस सेवा बन्द गरेका थिए । त्यही कारण पठाउन सकिनेलाई पठाइयो, त्यस लगत्तै पूर्ण लकडाउन घोषणा भयो, जसका कारण केही मानिस जान सकेनन्।’
यस्ता मानिसहरुको संख्या करिब एक हजार रहेको उक्त संस्थाले जनाएको छ। २४ मार्चमा स्थानीय प्रशासनले कार्यालय बन्द गर्न भनेको थियो, दुई दिनपछि एसडीएमसँग बैठक भयो र अर्को दिन ६ जनालाई परीक्षणका लागि पठाइएको जमातले जनाएको छ। त्यस्तै, २८ मार्चमा थप ३३ जनालाई परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। त्यसबेला पनि स्थानीय प्रशासनसँग सहभागीलाई घर जाने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको तबलीगी जमातले बताएको छ।
भारतीय सञ्चार माध्यमकाअनुसार धार्मिक संस्था तबलीगी जमात १९२० देखि चल्दै आएको हो। तबलीगी जमातमा आबद्ध मौलाना आजाद नेशनल उर्दू युनिभर्सिटीका उपकूलपति जफर सरेशवालका अनुसार यो मुसलमानहरुको विश्वकै ठूलो संस्था हो । यसका शाखा विश्वका एक सय ४० देशमा छन् ।
बीबीसी हिन्दी, द वायर र द प्रिन्ट, पिटीआईको सहयोगमा